ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): Don't Look Down On The Defilements
They Will Laugh At You
Sayardaw U Tejaniya (Shwe Oo Min Tawya)
Sayadaw U Tejaniya began his Buddhist training asayoung teenager in Myanmar under the late Shwe Oo Min Sayadaw (1913–2002). Afteracareer in business and life asahouseholder, he has becomeapermanent monk since 1996. He teaches meditation at Shwe Oo Min Dhammasukha Tawya in Yangon, Myanmar.
Publish at Scribd or explore others: eBooks buddhism
Publish at Scribd or explore others: Religion & Spiritual eBooks buddhism
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:45 PM
Labels: Dhamma Ebooks, U Tejaniya
သစ္စာအလင်း March 19, 2009 at 1:57 AM
သည် စာအုပ်လေးရတာ တော် တော် ဝမ်းသာ သွားတယ်..ချက်ချင်းတော့ မဖတ်နိုင်သေးဘူး.. ဖြည်းဖြည်းချင်းဖတ်သွားမယ်...။အချက် ၁၆၃ ချက် က တချိန်ချိန် မှာ အကူအညီအထောက်အပံ့ ပေးလိမ့်မယ်..။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
ကျန်းမာ ချမ်းသာ စွာ ဆက်လက် သာသနာ ပြုနိုင်ပါစေ...။
The Bliss Of Emancipation March 19, 2009 at 2:49 AM
စာအုပ်အလှူလာရောက် ခံယူသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဒီစာအုပ်ဟာ အစ်မအတွက် တရားသိမြင်မှုမှာ ကောင်းသော အထောက်အပံ့ဖြစ်နိုင်ပါစေ။